PTFE Maro adag Fabric-saareyaasha & shirkado - Shiinaha PTFE Maro adag Fabric Factory
Teflon dahaarka Maro adag
Teflon dahaarka Maro adag Maro ka samaysan yihiin sida ugu fiican marooyin la soo dhoofiyo sida wax tolidda si cad tolmo ama si gaar ah ugu duubnaa Maro adag aasaasiga ah maro, dahaarka leh cusbi PTFE ganaax ka dibna ka dhigi kala duwan ee ptfe maro heerkulka sare ee caabbinta dhumucdiisuna waxay kala duwan iyo ballacyo kala duwan.
Black Ptfe Maro adag Maro ka samaysan yihiin sida ugu wanaagsan ee muraayadaha la keeno sida wax tolidda si toos ah tolmo ama si gaar ah ugu duubnaa Maro adag aasaasiga ah maro, dahaarka leh cusbi PTFE wanaagsan ka dibna waxa ay ka dhigi kala duwan ee ptfe maro heerkulka sare iska caabin ah oo dhumuc iyo ballac kala duwan.
Mashiinka Ptfe waxaa laga sameeyaa sida ugu fiican ee loo yaqaan 'fiberglass' ee la soo dhoofiyo sida maaddada loo yaqaan 'tolida' ee loo yaqaan 'tol cad' ama si gaar ah loogu xiro maro adag oo aasaasi ah, oo lagu dahaadho miisaanka PTFE ee wanaagsan ka dibna ka dhig noocyo kala duwan oo ah dharka caabbinta heerkulka sare ee ptfe ee dhumucda iyo ballacyada kala duwan.
Ptfe dahaaray Fabric
Ptfe dahaaray Fabric waxaa laga sameeyaa Maro adag ugu fiican laga keeno sida wax tolida ah si cad tolmo ama si gaar ah ugu tolay galay Maro adag aasaasiga ah maro, dahaarka leh cusbi PTFE wanaagsan ka dibna ka dhigi galay noocyo kala duwan oo ah ptfe maro heerkulka sare iska caabin ah oo dhumucdiisuna waxay kala duwan iyo ballacyada.
Cajaladda Dahaarka ah ee Ptfe
Cajaladda dahaarka leh ee loo yaqaan 'Ptfe Coated Cope' ayaa laga sameeyaa maroog-fiska ugu wanaagsan ee la soo dhoofiyo iyada oo ah maaddada loo yaqaan 'tolida' si loo tolo ama loo khafiifiyo maro adag oo aasaasi ah, oo lagu dahaadhay miisaanka PTFE ee wanaagsan ka dibna ka dhig noocyo kala duwan oo ah dharka caabbinta heerkulka sare ee ptfe ee dhumucda iyo ballacyada kala duwan.
Dharka Dahaarka ah ee Ptfe
Mashiinka Dahaarka ah ee loo yaqaan 'Ptfe Coated Co Fabrics' ayaa laga sameeyaa maroog-dhalada ugu fiican ee la soo dhoofiyo iyada oo ah maaddada loo yaqaan 'tolida' si ay u noqoto mid cad ama si khaas ah ugu dhejisey dharka muraayadaha aasaasiga ah ee ka sarreeya, oo lagu dahaadhay miisaanka PTFE ee wanaagsan ka dibna ka dhig noocyo kala duwan oo ah dharka caabbinta heerkulka sare ee ptfe ee dhumucda iyo ballacyada kala duwan.
Maro adag Ptfe
Maro adag ee loo yaqaan 'Ptfe Fiberglass' waxaa laga sameeyaa sida ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'fiberglass' ee la soo dhoofiyo sida maaddada loo yaqaan 'tolida' ee loo yaqaan 'tol cad' ama si khaas ah loogu tolay maro adag oo aasaasi ah, oo lagu dahaadhay miisaanka PTFE ee wanaagsan ka dibna ka dhig noocyo kala duwan oo ah dharka caabbinta heerkulka sare ee ptfe ee dhumucda iyo ballacyada kala duwan.
Ptfe dahaarka Glass Fabric
Ptfe dahaarka Glass Fabric waxaa laga sameeyaa Maro adag ugu fiican laga keeno sida wax tolida ah si cad tolmo ama si gaar ah ugu tolan galay Maro adag aasaasiga ah maro, dahaarka leh cusbi PTFE ganaax ka dibna ka dhigi galay noocyo kala duwan oo ah ptfe maro heerkulka sare iska caabin ah oo dhumuc iyo ballac kala duwan.
Maro adag Ptfe dahaarka leh
Maro adag Ptfe dahaarka leh waxaa laga sameeyaa Maro adag oo ugu fiican ee la soo dhoofiyo iyada oo ah maaddada wax lagu tolo ee loo yaqaan 'tol cad' ama si gaar ah loogu xiro maro adag oo muraayadaha aasaasiga ah, oo lagu dahaadho miisaanka PTFE ee wanaagsan ka dibna ka dhig noocyo kala duwan oo ah ptfe dharka caabbinta heerkulka sare ee dhumucda iyo ballacyada kala duwan.
Aluminized Maro adag, Maro adag Dahaarka Acrylic, Maro adag Maro adag, Maro Maro ah, Acrylic dahaarka Maro adag Fabric, Pu Dahaarka Maro adag Fabric Maro,